Youth of May – Gold Channel Movies
May. 03, 2021 KBS2
Episode 1 May. 03, 2021
Youth of May ဆိုတဲ့ melodrama လေးကို GC ပရိတ်သတ်ကြီး အတွက် တင်ဆင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Hee-Tae ဟာ Single mother တစ်ဦးကမွေးလာလို့ အထင်သေးခံရတဲ့ ခေတ်ရဲ့စံနှုန်းတွေကို ချိုးဖောက်ပြဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ လူငယ်လေးပါ။ သဘောကောင်းပြီး ကြင်နာတတ်ပေမဲ့ စိတ်ခိုင်တဲ့ဆေးကျောင်းသားလေးပေါ့။ ကိုရီးယားရဲ့ထိပ်တန်း ဆေးကျောင်းမှာ တက်ပြီး အတန်းတွင်းမှာလည်းအမြဲထိပ်ဆုံးကပါပဲ။ ဒါပေမဲ့လည်း အခက်အခဲတွေနဲ့ကျောင်းသားဘဝကိုဖြတ်သနနေရတာပါ။ တစ်နေ့မှာတော့ Myung-Hee ဆိုနဲ့ သူနာပြုဆရာမလေးနဲ့တွေ့ဆုံပြီး နွေရာသီအချစ်ဇာတ်လမ်းလှလှလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပေါ်လာပါတော့တယ်။
Myung-Hee ကတော့ ဂွမ်ဂျူမြို့လေးမှာ သူနာပြုဆရာမလေးအဖြစ် တစ်ယောက်တည်းနေလာတဲ့သူပါ။ နူးညံ့တဲ့သူမဟုတ်ပဲ ပြတ်သားတဲ့သူပါ။ သူနာပြုနတ်သမီးလေး မဟုတ်ပဲ သူနာပြုစစ်သည်တော်လို့တောင် ခေါ်ကြပါသေးတယ်။ မတရားမှုကိုတွေ့ရင် ခေါင်းငုံ့မခံတတ်တဲ့ အမှန်တရားဘက်ကရပ်တည်တတ်တဲ့ မိန်းမလှလေးပါ။
သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းကို ၁၉၈၀ ခုနှစ်ဆီက ဂွမ်ဂျူမြို့မှာ တော်လှန်ရေးတွေစတင်တဲ့မေလမှာ ဇာတ်အိမ်တည်ပြီး ရိုက်ကူးထားတာပါ။ နိုင်ငံရေးမတည်မငြိမ်မှုတွေကြားထဲမှာ စတင်ခဲ့တဲ့ ကြည်နူးဆွတ်ပျံ့ဖွယ်အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးဟာ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ တောင်ကိုရီးယားရဲ့တော်လှန်ရေးကြီးလိုပဲ ပျော်ရွှင်ဖွယ်အဆုံးသတ်နိုင်မလားဆိုတာကိုကြည့်ရှုခံစားပေးကြပါဦးနော်။ Must Watch နော် FA တို့။
Translated by Athena,Faith,Hnin Aye Nyein and Thae
ThidaMay 16, 2021Reply
အပိုင်းသစ်တက်တိုင်း Update ချက်ချင်းတင်ပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်🙏
အပိုင်း ၃ မရသေးဘူးလား . . .
Aung Bo ThweMay 11, 2021Reply
Victor KhaiMay 4, 2021Reply
အက်မင်းကြီးလည်း FA မို့လို့ ဗြဲ😂🤣🤣